डा. भट्टराई र कठोर नीतिका पहेलीहरु | चितवन पोष्ट दैनिक
डा. भट्टराई र कठोर नीतिका पहेलीहरु
२०७१ फाल्गुन २६, मंगलवार ०१:५० गते
वर्षभरि नै विभिन्न तहमा विभिन्न स्थलमा पटकपटक संवाद भए । तर, अन्तिम निष्कर्ष भने निक्लन सकेकै थिएन । निस्कन सक्ने सम्भावना भने थियो । दलहरु आफैँले भाका राखेको मिति निकै नजिक आउँदै थियो । ओली र प्रचण्डबीच सहमति भए संविधान आउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको खबर प्रेषित हुँदै थियो । अन्ततः संविधानसभाका अध्यक्षको संयोजनमा गत माघ ५ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच १ घन्टा लामो संवाद पनि भयो । तर, बन्न सकेन सहमति । माघ ६ गते सत्तापक्षीय दलहरुले प्रश्नावली समिति बनाउने प्रयत्न गरेपछि उत्तेजित भएका विपक्षी दलहरु तोडफोडमा उत्रिए । पछिल्ला दिनहरुमा पनि रोस्टम घेराउ गरिरहे । अन्ततः तीव्र दबाबका माझबाटै संविधानसभाले प्रश्नावली समिति निर्माण गरेरै छाड्यो ।
निहुँ र खोचे थापेर बसिरहेका दलहरुलाई पर्याप्त मसला बन्यो, यही विषय । उनीहरु झन् भए उत्तेजित रथाले अनर्गल प्रलाप गर्न । सत्तापक्ष पनि थाले बेलगाम प्रलाप गर्न । दुवै अनपढ गवाँरले झैँ थाले धारे हात लगाएर सराप्न । सात पुस्तासम्मको उर्दी कसी झगडा गर्ने गुरूप्रसाद मैनालीको छिमेकी कथाका गुमाने र धनजीतेजस्तै ।
भर्खरै घरभित्र थुनेर वार्तामा बोलाइएको आरोप लगाए, डा. बाबुराम भट्टराईले । माघ ११ गते प्रक्रिया आरम्भ गर्न भूमिका खेलेकोमा उनले सभाध्यक्षलाई शिखण्डीको संज्ञा दिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढाउनेहरुमा राजा महेन्द्रको भूत देखे । राजतन्त्र बढारिएझैँ अबको आन्दोलनबाट कांग्रेस र एमाले बढारिने स्वप्न देखे । ओलीमा अतिशय छुच्चोपन भेटे । सायद्, उनले सँगै देखिरहेका थिए, पार्टीको अध्यक्ष भएको पनि । यसै मोहले उनलाई खिचिरहेको थियो, आन्दोलन गर्ने चौबाटोसम्म ।
अहिले उनी आन्दोलन हाँक्नकै लागि पश्चिम कमान्डर बनेका छन् । उनले नियुक्ति पाएका छन्, राणाकालमा पूकज(पूर्वकमान्डिङ जर्नेल) पकज (पश्चिम कमान्डिङ जर्नेल) पाएजस्तो । र, रातदिन खटिरहेछन् आन्दोलनको सुनामी ल्याउन । जुन सुनामीले श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया र भारतमा ठूलो विनाश पैदा गरेको थियो । त्यस्तै सुनामी ल्याउने र कांग्रेस–एमालेलाई बढारेर महासागरमा पु¥याउने ।
कस्तो दुर्भाग्य छ ! बाबुरामले संविधानसभाले प्रदान गरेको संवाद तथा सहमति समितिको पद थेग्नै सकेनन् । पटकपटक कांग्रेस तथा एमालेलगायतका दलहरुले स्वतन्त्र रुपमा प्रतिवेदन ल्याउने अधिकार दिँदा पनि ल्याउन सकेनन् । तिनै व्यक्ति संविधानसभामा प्रक्रिया आरम्भ गरिँदा त्यसदिनलाई कालो दिन भन्दै हिँड्छन् । संविधानसभालाई ‘कु’ गरियो, प्रक्रिया फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कम्तीमा बाबुरामको मुखलाई शोभा दिनेचाहिँ होइन । जसले संविधानसभालाई विघटित ग¥यो । जसले लामो समयसम्म विवाद हुँदाहुँदै पनि सत्तामा टाँसिएरै बस्यो । जसले भारतसँग धेरै विवादास्पद निर्णयहरु ग¥यो । जसले राजकीय शैलीमा जनताका घरघरमा पुगी मेवा, मिष्ठान्नहरुको आस्वादन ग¥यो । जसले संविधानवाद र न्यायप्रणालीको विरूद्धमा गई खिलराजलाई सत्ता सुम्पियो । उसैले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नुमात्र हो । किन संवाद तथा सहमति समितिले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा अहिले आएर सिद्ध भएको छ । उनी मन, बचन र कर्मबाट प्रतिबद्ध रहेनछन् । बाहिर हेर्दा प्रचण्ड देखिए पनि भित्र उनी नै बाधक बनिरहेका रहेछन् भन्ने आभास हुन थालेको छ । प्रचण्ड सहमति गरेर हिँड्ने, पछि उनले हुन्न भन्नुको कारण उनमा यही र यस्तै डा. भट्टराई प्रवृत्ति हाबी भएर हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ अहिले ।
कार्यकर्तामाझ जम्ने र प्रचण्डीय धारलाई पनि आपूmतिर मोड्न उनले यसलाई रणनीतिक रुपमा राम्ररी उपयोग गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । भारतपरस्तको आरोप खेपेका र यदाकदा उनीबाट हुने गरेका भारतपरस्त सन्धि, सम्झौता र निर्णय गर्ने भट्टराई नै आजभोलि भारतप्रति बक्र अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले प्रचण्डीय धारलाई आपूmतिर आकर्षित गर्नमा मद्दत पु¥याउने र वैद्य तथा विप्लवतिरको धारलाई पनि आपूmतिर मोड्ने रणनीतिक कदमका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
अहिले प्रचण्ड लचिलो बन्दै गएका छन्, तर बाबुराम झन्
कठोर । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि लचिलो बनिरहेकै अवस्थामा मधेसी मोर्चाका एक–दुई अनुदार चरित्रलाई भजाएर उनले सिङ्गो देशमाथि त राजनीति गरिरहेछन् नै, थप प्रचण्डमाथि पनि दह्रो मुक्का प्रहार गरिरहेछन् । प्रचण्ड स्वयंले आपूmलाई हुस्सु भनेका छन् र यो कदाचित सार्थक बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । उनको यो अस्वाभाविक प्रवृत्ति देखेर उनका विश्वासपात्रहरु पनि अहिले सशङ्कित हुन थालेका छन् । उनी आन्दोलन चर्काउन दौडहामा लागिरहँदा उनका अभिन्न सहयोगी मित्र वार्ताको वातावरण बनाउन अथक प्रयत्न गरिरहेछन् । पार्टीका कार्यकर्तामाझ बिनाअवरोध पुग्न पाइने उनको यो चातुर्यलाई प्रचण्ड पक्षधरले पनि नाइँ भन्न नसकेको अवस्था पैदा भएको छ अहिले ।
अस्तिसम्म निकै लचिलोजस्तो देखिने उनी प्रचण्डप्रति नै लक्षित गर्दै युद्धकालीन मानसिकताले संविधान बन्दैन भन्दै व्यङ्ग्य गरिरहेका देखिन्थे । शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति तिखो कटाक्ष गर्दै सत्ताको भागबन्डा नमिलेर सहमति बन्न नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै हुन्थे । त्यस ताका उनको निश्छल र निस्वार्थजस्तो देखिने प्रवृत्तिबाट जनता निकै प्रभावित बने र साथमा उनको लोकप्रियता ह्वात्तै आकासियो पनि । लाग्थ्यो उनीभन्दा सरल, निश्छल, राष्ट्रवादी, निस्वार्थी र बुद्धिमानी नेता यो देश दुनियाँमा छँदै छैन । असहमतिकै सही तर प्रतिवेदन बुझाउन पुग्दा उनको कद निकै उचाइमा पुगेको थियो । यद्यपि, उनले प्रचण्डको कथन र सङ्केतलाई तुरून्त मानेर नबुझाइकन नै फर्किए । पछि त्यो जेष्ठताका आधारमा सूर्यबहादुर थापाले बुझाए । विपक्षी दल असहमत र आन्दोलनमै रहेकाले उनले बुझाएनन् । यसमा त्यति विमति नराखेको देखियो, जनता र अन्य दलका नेता गणले पनि । तर, जसै संविधान निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ भयो, तब उनी नाटकीय रुपमा आक्रामक भए र पकने (पश्चिम कमान्डिङ् नेता) पाएर दौडाहामा होमिए र यो क्रम अद्यापि जारी नै राखेका छन् उनले ।
यसक्रममा उनले थुपै्र सत्तापक्षको सत्तो सराप गर्न निकै खर्चिसकेका छन्, शब्दहरु । उनी प्रायः दोहो¥याई रहन्छन्– लिङ्ग, वर्ग, जाति, मुस्लिम, मधेस, महिला आदिको मुक्तिका लागि जस्ता कुराहरु । जुन समावेशी संविधान बन्नासाथ स्वतः प्राप्त हुन्छ । जति ओलीलाई आपूm अध्यक्ष बन्दा झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जति रामचन्द्र र देउवालाई सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्न सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिका रुपमा व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै बाध्यता छ बाबुरामलाई पनि, आपूm अध्यक्ष बन्न प्रचण्डलाई स्पेस दिने वा राष्ट्रपतिका रुपमा स्थापित गर्नैपर्ने । त्यस्तै बाध्यता छ, मधेसवादी दलहरुलाई उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबीलाई कायम राखिरहने । त्यस्तै सभाध्यक्ष र उपसभामुख, संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिहरुमा अंश
खोज्ने । तर, दोस्रो संविधानसभाको जनादेशले त्यो हैसियत दिएको छैन, तापनि जबर्जस्ती लेनदेन गर्ने वातावरण बनाउन सके केही न केही हात लाग्न सक्ने आशामा दलहरु जोडतोडका साथ लित्ती कसेर लागिपरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने दलहरुले वास्तवमै संघीयता र नामकरणका विषयहरुमा विमति भई राजनीतिक गतिरोध पैदा भएको प्रतीत हुन्न । केही हदसम्म क्षेत्रीय दल र जातीय प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकृतिका दल र तिनका नेताले राष्ट्रिय मर्म र संवेदना तथा उच्चतम हितलाई हेरिरहेको आभास हुँदैन । चाहे समानुपातिक प्रणालीबाट नै भए पनि आपूm संसद्मा पुग्नै प¥यो नि भन्दै आफ्नो पदको सुनिश्चितता खोज्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाजस्तै आफ्नो पकेट यरिया फलानो सङ्घीय राज्यमा पर्ला कि नपर्ला, नपरे त मेरो राजनीतिक भविष्य नै स्वाहा हुने भइहाल्यो नि भन्दै आफ्नै राजनीतिक भविष्यको मात्र चिन्ता लिनेजस्ता सङ्कीर्ण सोच र तज्जन्य कर्मले पनि राजनीतिको गाँठो कसिलो बनाइरहेको प्रतीत
हुन्छ । पूर्वका तिन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्ला विवाद र मिश्रित चुनाव पद्धति राख्ने दबाब र सहमतिले यसतर्फ सङ्केत गर्दछ ।
यसर्थ, अहिलेका कतिपय विवाद बाहिर भन्नै नमिल्ने भन्दा लाजमर्दो मात्र नभई राजनीतिक चरित्रको भण्डाफोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती पनि हुने भयले ता¤िवक कुरा बाहिर आउन नसकेको कतिपयको ठम्याइ छ । यस कुरालाई डा. बाबुराम स्वयंले एक दिन मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने उक्ति उद्धृत गरेको प्रसङ्गबाट स्पष्ट हुन्छ । अतः यहाँ अहिलेको विवाद र विमति राजनीतिक लेनदेनको नभई सत्ता राजनीतिको हो भन्ने आमबुझाइ
छ । दलहरु र तिनका नेता गणका हात्तीका चपाउने दाँत र देखाउने दाँत अलगअलग भएझैँ देखिएका विवाद पनि रुपमा अर्कै र सारमा अर्कै भएको आभास मिल्न थालेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई केही समय अझै लम्ब्याउँदै जाने हो भने जनता प्रतिगमनकारी शक्तिका सहयोगी पात्र बन्न सक्ने खतरालाई हृदयंगम गरी वार्ता, संवाद, सहमति र प्रक्रियाबाट संविधान लेखनको गन्तव्यमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बन्दै गएको छ । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकिएमा पछि चुकचुकाउनुबाहेक अन्य उपाय बाँकी रहँदैन ।